/blog/Gallery/Sida Loo Doorto Qalabka Dabeecadda Qalabaynta Xiddiga 12
Posted on 04 / 23 / 2019 by Dr. Patrick Young ku qoray Gallery.
Badeecada istiraatiijiga ah ee loo yaqaan "steroids" ee aad doorato waxay saameyn toos ah ku leedahay haddii aad gaadhay hadafyada aad sameysay iyo in kale. Waxaad dooran kartaa alaab-qeybiye qaldan, oo laga yaabo in aad ujirtid lacag badan iyo waqti badan.
Xaqiiqdii, doorashada doorashada ugu fiican ee sterids ee alaab-bixiyuhu waa waqti wakhti badan oo xoogaa adag ah. Dad badan ayaa joojiya ka hor intaanay aqoonta farshaxanku ka dhicin. Maanta, waxaan ku deyn doonnaa qodobbada muhiimka ah iyo qalabka loo isticmaalo si loo aqoonsado iibiyeyaasha ugu fiican, isbarbardhiga midba midka kale, ugu dambeynna dooro alaab-qeybiyaha ugu fiican ee aad ku kalsoonaan karto. Waa hagaag, bal aynu bilawno!
Soo-saareyaasha- Waad soo wici kartaa shirkadaha steroid-ka ee aad taqaanid oo ka codso inay kuu soo diraan liiska shirkadaha aad la xiriiri karto. Sidaa awgeed, waxay kaa caawineysaa inaad hesho sida ugu fiican ee aad ganacsiga u sameyn karto.
carwooyin- Tani waa meesha ugu fudud ee aad heli karto liiska alaab-qeybiyeyaasha sababta oo ah waxaa jira tiro badan oo ka mid ah aaggaas. Ka hor intaadan booqan bandhig, hubi in aad eegto liistada liiska soo bandhigayaasha si aad u hubiso in ay jiraan kuwa ku jira shuruudahaaga.
La-taliyayaal ganacsi- Waxaa laga yaabaa inaad ka soo jeeda ururo qaran ama mid maxalli ah oo taageera ganacsiyada. Tusaale ahaan kuwan waa qolalka ganacsiga.
Saxaafadda ganacsiga- Badanaa, wargeysyada ganacsiga waxay bixiyaan meelo xayeysiis ah alaab-qeybiyeyaasha. Nasiib wanaag, waxaa jira kuwa ku takhasusay xirfado gaar ah sidaa daraadeed ma aadi doontid raadinta liiska alaab-gacmeedyada steroid ee wargeyska dhismaha.
Google- Tani waa meel loo isticmaalo meesha aad ka heli karto alaab-qeybiyeyaasha oo ku saleysan shuruudaha dhabta ah sida shey gaar ah, iyo kuwo kale oo badan. Haddii aad taqaanid steroid saxda ah oo aad rabto, waxaad raadin kartaa "alaab-qeybiyeyaasha steroid x."
Waxaad dooran kartaa inaad ku darto su'aalo xiran oo furan oo labadaba si ay alaab-qeybiyeyaashu kuu sharxaan sida ay uga shaqeeyaan meelo kala duwan. Taasi waxay gacan ka geysan doontaa kor u qaadida daacadnimada maaddaama aysan haysanin inay haa uga jawaabaan su'aalaha oo dhan.
Waxaa intaa dheer, waxay ka caawisaa dhisitaanka sawir faahfaahsan oo ku saabsan sida alaab-qeybiyuhu u shaqeeyo. Waa fikrad wanaagsan inaad dalbato alaab-qeybiyeyaasha kartida leh warbixinnada baaritaanka shaybaarka, sida HPLC, NMR, COA (Shahaadada Falanqaynta), iyo caddaynta sida GMP (Hagaajinta Horumarinta Fiican). Dukumeentiyadani waxay kaa caawinaysaa inaad ogtahay in steroids soo saaray ay yihiin kuwo la soo saaray iyo lagu xakameynayo heerarka tayada.
Ka hor inta aanad dooran qalabka alaarmiga loo yaqaan "steroids", waa inaad fiirisaa dareenka iyo waqtigeeda marka la eego taariikhda dhalidda. Xaqaqeeyaha saxda ah wuxuu qaadan doonaa wax ka yar saacadaha 24 si uu u soo saaro xirmooyinkaaga isla markaana hubiyo in uu yimaado goobta aad u socotid wakhti yar ee suurtogalka ah.
Inaad haysato alaab halbeeg leh oo lagu kalsoonaan karo waxay kuu saamixi doontaa inaad maareysid saamigaaga iyo sidoo kale waxaad ka filan kartaa macaamiishaada ku saabsan bixinta iyo wakhtiyada sugitaanka.
Bogga adeege-bixiyuhu wuxuu leeyahay macluumaad badan oo qiimo leh oo aad isticmaali karto si aad u gaarto go'aanka kama dambaysta ah. Shirkad sharci ah ma laha wax qarinaysa, badanaaba waxay ku siin doontaa macluumaad badan oo ku saabsan nagu saabsan bogga. Calaamadee tirada shaqaalaha loo shaqeeyo, baaxadda warshadda iyo qadarka maalgashiga.
Inkasta oo nidaamka xulashada qalabka loo yaqaan 'steroids' loo yaqaan 'powder powdered process' ay u muuqan karto muddo dheer, ka dib markii tallaabooyinka fududaa la fududeeyaa ay ku badbaadin karaan waqti Qaadashada gaaban ama dhimisku waxay kugu kici kartaa wax badan oo ku saabsan jaangooyooyinka shuruudaha kulamada, dhisida sumcad xoog leh ee sterids tayada iyo kordhinta baahida macaamiisha.
Boldenone Undecylenate: 8 Saameynaha Waxyeelada Waxyaabaha Aad Doonayso Inaad Ka Badbaadisid 2019 Sida loo sameeyo testosterone si aad uhogaliso xannibaadaha 6